Hainkintana - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Astronomia)
Ny hainkintana dia siansa voajanahary mikasikan’ny fandinihana ny kintana, izay mitady ny hamaritra ny fihaviany, ny fivoarany ary ny tondrony ara-pizika ary aza-tsimika. Fito arivo taona lasa izay ny taranjan’ny hainkintana no fantatry ny olombelona ; amin’ny alalan’ny tao ara-pinoana ny taona nialohan’ny tantara, ka noho izany dia anisan’ny taranja siantifika antitra indrindra.
Ireo mpahainkintan'ny taona taloha izay namela antsika lova ara-materialy dia ny Ejipsianina, ny Nobianina (mponina mipetraka ao atsimon'i Ejipta) ary ny sivilizasiônan'i Stonehenge, any andrefan'i Angletera amin'izao fotoana. Nanana fomba fandinihana ny lanitra maizina ireo sivilizasiôna taloha toy ny babilaonianina, ny grika, ny sinoa, ny indianina, ny iranianina ary ny Maya. Na dia izany aza, nilaina ny famoronana ny masolavitra hahafahan'ny hainkintana mivoatra amin'ny siansa ankehitriny. Tamin'ny taloha, haindrefikintana (astrométrie), ny familian-tsambo amin'ny alalan'ny kintana, ny hainkintana mandinika, ny fanaovana kalandrie ary ny fanandroana, ankehitriny anefa ny hainkintana arak'asa dia matetika ampiarahana amin'ny fizikan-kintana (na astrofizika).
Mbola betsaka ny fandraisan'anjaran'ireo mpahainkintana tsy manao azy arak'asa (amatora) amin'ny fahitam-baovao ara-kainkintana amin'izao fotoana izao, ary anisan'ny taranja mbola manome anjara an'ireo mpahainkintana tsy manao azy arak'asa ny hainkintana.
((fr)) Miresaka momba ny foton'ny hainkintana ho an'izay olona manomboka
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hainkintana&oldid=767937"
Voaova farany tamin'ny 18 Aprily 2015 amin'ny 08:06 ity pejy ity.